Ny môsialy indostrian-tsolika ambany sy ny fanaraha-maso moto
Ny mpamatsy motera ara-indostrian-tsoavaly ambany-boloky
Fivarotana mivantana ny motera indostrialy tena izy
Misafidiana avy amin'ny motera indostrialy isan-karazany. Mitadiava mora foana ho an'ny indostrian'ny fiara
Ny fampiasana tariby varahina sy vy vy avo lenta, ny fizotry ny 100, ny fikolokoloana tsara, avelao hampiasa fiadanan-tsaina bebe kokoa ianao; rotor-miorina tsara, malefaka fiasa, mampihena ny fahaverezana, manangona angovo ary maharitra; kofehy vita amin'ny vy vita amin'ny kalitao avo lenta mba hahazoana antoka ny mony akaiky, ny rotor Smooth sy ny asa mahomby.
Amin'ny traikefa an-taonany maro amin'ny fampiharana motera indusrial, manamboatra sy manamboatra vokatra motera indostrialy sy servo izahay ho an'ny tsenan'ny Varotra, Indostria ary Aerospace ary Fiarovana. Ny motera misy antsika dia misy adidy amin'ny toeram-piompiana, HP kely, porofo mipoaka, motera ac & dc. mpivarotra entana sy mpivarotra enta-mavesatra; Fitaovana sy fizotran'ny fanamboarana. Alos, manolotra fanamboarana motera servo izahay, fanamboarana motera indostrialy, varotra motera vaovao sy nohavaozina, serivisy aorian'ny fivarotana ary fanampiana ara-teknika.
Servo mihetsika vokatra
Môtô kely maotera kely
Porofo mipoaka ny motera indostrialy
Indostrian'ny maotera avo lenta
Mamokatra motera isan-karazany izahay ary afaka manamboatra ny motera arak'izay ilain'ny mpividy ihany koa. Manana traikefa famokarana taona maro izahay, ny vokatra dia mampiasa endrika matevina, izay mahatonga ny fahatsaran'ny hafanana mihena kokoa; mampiasa tohatra avo lenta, fifidiana fitaovana tsara, famokarana arak'asa.
Famatsian-motera indostrialy, motera herinaratra indostrialy amidy, 5 HP Air Compressor Electric Motor, servisy motera indostrialy ary ny marika maotera indostrialy ampiasainay dia malalaka ho an'ny siemens, WEG, TECO Leeson, Baldor, ABB, Bison, Marathon, KB, Grove sns. Serivisy fanamboarana maotera elektrika toy ny famerenana amin'ny laoniny ny motera, ny shredder, ny switchgear ary ny fanamboarana moto elektrika. Ho an'ny motera elektrika fanamafisana tanteraka (TEFC) tanteraka - ampiasaina, amidy, mividy, mivarotra, varotra, manerantany.
Mamokatra karazana motera rehetra izahay, afaka manao motera mifanaraka amin'ny filan'ny mpanjifa ihany koa izahay. Manome vokatra avo lenta sy ambany izahay. Raisinay ho kalitao ny kalitao ary ny vidiny ambany indrindra dia ny fahatsoram-po.
Ny fanampiana amin'ny fampiharana ho an'ny vahaolana indostrialy sy ny mpanamboatra milina no manokanay. Nandritra ny taona maro momba ny fahaiza-manao dia misy ny Electric Motors, Gearboxes Mekanika, Pump Motors, Industrial Electrical Installation's & Controll, Industrial ventilation, serivisy 24 ora amin'ny famaliana ireo fanontanianao rehetra.
Isika dia iray amin'ireo marika mitarika eo an-tsena izay mivarotra sy manompo ny motera indostrialy lehibe andalana feno ny varotra amin'ny karazan-tsolika elektrika isan-karazany avy amin'ny herinaratra ambany, horsepra fractional mankany horsepower avo, haino aman-jery rehetra an'ny motera mandeha amin'ny herinaratra izay azo ampiasaina ho an'ny indostrialy isan-karazany. fampiharana.
Ny traikefa amin'ny famokarana môtôta taona dia ny hanome anao kalitao avo lenta sy maharitra ihany.Manao matoky ianao fa ny kalitaonay moto.
Raha manana fanontaniana ianao dia afaka mifandray aminay, dia ho faly hanampy anao izahay! Ny serivisy ho an'ny mpanjifa an-tserasera mandritra ny andro.Misy rafitra fiverenana tsara.
Vitsy kokoa ny manam-pahaizana eto an-toerana manana fikarohana sy fiankinan-doha tsy miankina ary iray amin'ireo orinasa matihanina vitsivitsy izahay
Ny maodelin'ny moto tsirairay dia manana ny vidiny manokana, ho mora apetraka isika amin'ny alàlan'ny filan'ny mpividy, fihenam-bidy bebe kokoa sy bebe kokoa.
Raha manana ny vokatra tianao, andao hifandray aminay!